Germany, France, Italy iyo Spain oo joojiyay isticmaalka tallaalka AstraZeneca
Tallaalka Astra Zeneca ee COVID-19.
Dalalka Germany, France, Italy iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka tallaalka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca, kadib markii ay soo bixino warbixino sheegaya waxyeellooyin ay ka mid yihiin xinjiro dhiig ah oo xiray xididada dadkii qaatay tallaalkaas.
Waddanka Denmark oo isticmaalka tallaalkan joojiyay todobaadkii hore ayaa xaqiijiyay in haweeneyd 60-jir ah ay geeriyootay markii ay qaadaay tallalka AstraZeneca, kaddibna ay xirmeen xidida dhiig mareenka, sida ay sheegtay hey'adda caafimaadka dalkaas.
Madaxa hey'adda Caafimaadka adduunka Dr. Tedros Adhanom ayaa sheegay in galinka dambe ee maalinta talaadada ah uu shir guddoominayo kulan looga tashanayo arrintan, waxaana uu sheegay inay kulankaas ka soo qeyb gali doonto hey'adda caafimaadka Yurub ee EMA.
Wasiirka Caafimaadka ee Jarmalka Jens Spahn iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga Gianni Rezza ayaa sheegay in kasta oo halista xinjirowga dhiigu ay yartahay hadana aan meesha laga saari karin waxyeelada tallaalkan.
Spahn ayaa sheegay in joojinta tallaalkan uu soo jeediyay machadka cilmi-baarista caafimaadka ee Paul Ehrlich, wuxuuna sheegay in taladaas ay ku qanacday dowladda Germany.
AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaaceysa eedeymahan waxay sheegtay inay sameysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 17 milyan oo qof oo ka qaatay tallaalkeeda dalka Midowga Yurub iyo Ingiriiska taas oo aan muujin wax caddeyn ah oo ku saabsan halista xinjirowga dhiigga ee laga soo sheegayo dalalka qaarkood.